304Stainless ígwè nkesa
Ọla kọpa nkesa
Ọla kọpa ngwa
90 Celsius ọla kọpa n'ikpere aka
Ịnakọta oghere eji ekunye ume
ọla kọpa atọ
M ọla kọpa atọ
T ọla kọpa atọ
U ọla kọpa n'ikpere aka
Welded anwụrụ oyiyi akwa
Y ọla kọpa atọ
Ọla kọpa anwụrụ oyiyi akwa
Mmiri eruba nkesa
2 ụzọ eruba nkesa
3 ụzọ eruba nkesa
4 ụzọ eruba nkesa
6 ụzọ eruba nkesa
Ọla kọpa na nkwonkwo
Ọla kọpa nut
"Importance" nke etiti ikuku-oyi ngwa
Onye ọ bụla bụ onye nwerela Central ntụ oyi, na ịdị adị nke Central ntụ oyi ngwa na-ele "nhọrọ", ka anyị lee ha jikọtara ume! Anyị niile mara otú Central ikuku conditioners na-arụ ọrụ site compressing refrigerants n'ime mmiri site compressors wee co ...
About ọla kọpa (metal mmewere)
Ọla kọpa bụ a Transitional mmewere, chemical akara Cu, English ọla kọpa, ọnụọgụ nzùrùòkè 29. Pure ọla kọpa bụ a adụ metal. Mgbe n'elu na-ebipụ, ọ bụ ọbara ọbara-oroma na a dara luster. High ductility, kwes conductivity na ọkụ conductivity-eme ka ọ na-akacha eji ihe onwunwe ke Gịnị ...
Ntụ oyi ngwa zuru ezu
Mbụ niile, ọ bụ 6 usoro: duct usoro, na friji usoro, humidifying usoro, electric kpo oku usoro, ike nkesa usoro na akara nchedo usoro. Air duct usoro: ikuku duct usoro nke pụrụ iche ikuku conditioner ke igwe ụlọ a na-emekarị ekewet nke moto, FA ...
Arụ ọrụ ụkpụrụ nke na friji akụkụ
The arụ ọrụ ụkpụrụ nke na friji bụ na Compressor compresses uzuoku na ala mgbali n'ime uzuoku na elu nsogbu, ka o wee belata olu nke uzuoku na ịmụba nrụgide. Compressor mmiri si evaporator arụ ọrụ na-ajụ ala nsogbu uzuoku, mgbe mgbali n'ime ...
Ọ bụrụ na ị na-amaghị ihe Google Analytics bụ, wụnye ya na gị na website, ma ọ bụ arụnyere na ya ma ọ dịghị mgbe anya na gị data, mgbe ahụ, a na post bụ maka gị. Mgbe ọ bụ ike n'ihi na ọtụtụ kwere, e nwere ndị ka nrụọrụ weebụ na-adịghị eji Google Analytics (ma ọ bụ ọ bụla nchịkọta, maka ...
Nke 18, Zhao Xian Road Songhu lndustrial Mpaghara, Yuecheng Town, Yueqing City, Wenzhou City, Zhejiang Province, China